Ugbu a, ị ga-ekwenye na ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na etiti dị na UNIDAYS iji nwee obi ụtọ na mbelata ego na ngalaba agụmakwụkwọ | Esi m mac
Ugbu a, ị ga-ekwenye na ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na etiti dị na UNIDAYS iji nwee obi ụtọ na mbelata ego na ngalaba agụmakwụkwọ
Obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ n'ime ndị ahụ zụtara ngwaahịa na Apple na-enwe ọnụego mbelata maka ngalaba agụmakwụkwọ. Maka ndị na-amaghị nhọrọ ịzụta ihe a, dokwuo anya na ọ bụ ngalaba nke anyị nwere ike ịchekwa euro ole na ole na ngwaahịa Apple dịka Mac ma ọ bụ iPad. Mbelata ego dị iche dabere n'ụdị ahọrọ na anyị nwere ike nweta ego ruo 365 euro mgbe ịzụrụ Mac cna AppleCare ma obu Ego 68 maka ịzụta otu IPAD.
Ruo ugbu a, ngosi nke nkwenye maka ịbụ ndị nne na nna na-azụta maka ụmụ akwụkwọ mahadum ha, ndị nkuzi ma ọ bụ ndị ọrụ nchịkwa nke ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ọ bụla enweghị usoro ma anaghị arịọ ya mgbe niile, ugbu a ọ dị mkpa iji gosi na anyị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-amụ ihe na etiti site na UNiDAYS.
Ọtụtụ n'ime ndị ahụ nọ na-ejide n'aka na ha jiri ohere mbelata na ọnụahịa ikpeazụ maka ngwaahịa ọ bụla Apple nwere na ngalaba ngalaba mmụta ya ma ewepụtaghị nnabata ọ bụla maka ya. Ihe ndị a gbanwere ugbu a ndị ọrụ niile chọrọ ịnụ ụtọ ego ndị a ha kwesiri inwe nke ha akaụntụ efu na UNiDAYS.
Apple na-enye ụmụ akwụkwọ mahadum ego dị iche iche maka agụmakwụkwọ maka ọtụtụ afọ ma ọ bụ kwenye na mahadum, ndị nne na nna ụmụ akwụkwọ a zụrụ maka ụmụ akwụkwọ mahadum ha na ndị nkuzi ma ọ bụ ndị ọrụ nchịkwa nke ọkwa niile na-arụ ọrụ na mahadum. Enwere ike ịchọta ozi niile gbasara ohere ịzụta ihe na ego ndị a na weebụsaịtị nke Apple, na ngalaba Ppingzụ ahịa maka Mahadum.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ugbu a, ị ga-ekwenye na ị bụ nwa akwụkwọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na etiti dị na UNIDAYS iji nwee obi ụtọ na mbelata ego na ngalaba agụmakwụkwọ
Ndewo, Achọrọ m ịzụta iMac n'ọdịnihu dị nso. Enwere m nwa nwoke 21 afọ nke gụchara nke mbụ nke ogo dị elu na Ọrụ Kọmputa na Nchịkwa Network. Onye ọzọ sitere na 18 na-eme nhọrọ ugbu a iji rụọ ọrụ akpaaka na Robotics Engineering. Abatala m ịdebanye aha na UNiDAYS na eziokwu bụ na amaghị m otu esi edebanye aha m ma ọ bụ na m nwere ike na ihe ụmụ m na-agụ ugbu a. I nwere ike ime ka o doo m anya ihe ozo ??? Ezigala m email na UNIDAYS ka m lee ma ha ga-aza m.
Zaghachi Jaime PT
Nsogbu dị na Unidas bụ na ọ na-arịọ maka akaụntụ site na ebe agụmakwụkwọ, dịka nwa akwụkwọ anaghị m ekwu akaụntụ
Enwere m ozi-e iri na abụọ na-enye ha ozi m niile na nke ebe m na-arụ ọrụ ka ha wee hụ na abụ m onye nkuzi, etinyegoro nzere m. Ana m aza ihe niile n'ọtụtụ ozi ịntanetị nke ha na-emeghachi ajụjụ. Afọ juru m afọ, aga m agwa Apple okwu ma kọọ akụkọ a enweghị ebe ọ bụla ọ nọ.
Nnọọ! Na njedebe ị nwetara? n'ihi na otu ihe ahụ na-eme m, ọ na-agwa m na ngalaba ahụ adabaghị na ọ gaghị ekwe ka m debanye aha.
114 pụrụ iche na ọkachamara CV ndebiri maka naanị otu euro